DEG DEG+XOG:Madaxweyne Gaas oo ku dhawaaqaya dagaalkii ugu cuslaa & Xildhibaanada P/land oo shir deg deg ah ka yeeshay Xaaladda Tukaraq+Soo Celinta Sool – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home 2018 July W.Gudaha, Wararka Maanta DEG DEG+XOG:Madaxweyne Gaas oo ku dhawaaqaya dagaalkii ugu cuslaa & Xildhibaanada P/land oo shir deg deg ah ka yeeshay Xaaladda Tukaraq+Soo Celinta Sool
DEG DEG+XOG:Madaxweyne Gaas oo ku dhawaaqaya dagaalkii ugu cuslaa & Xildhibaanada P/land oo shir deg deg ah ka yeeshay Xaaladda Tukaraq+Soo Celinta Sool
GAROOWE(P-TIMES)- Kadib markii maalintii shalay ahayd Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ay kulan ka yeesheen xiisadaha deegaanka Tukaraq iyo hawlgalka xoreynta gobolka Sool ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland isku waafaqeen xaalad dagaal oo deg deg ah isla markaasna ay la xisaabtan la samayn doonaan gudida hawlgalka xoreynta gobolka Sool.
Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa la sheegay iyaga oo ka duulaya celinta gobolka Sool iyo dhowrista Dastuurka dowladda Puntland in ay kulan la qaadan doonaan madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas iyo gudida xoreynta gobolka Sool si ay ugala hadlaan xaaladaha gobolka Sool iyo sidoo kale qaabka ugu haboon ee ay dowladdu u soo celin karto gobolkaasi.
Qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo la hadlay Puntlandtimes.com ayaa sheegay in kulankoodan ay isla soo hadal qaadi doonaan labada dhinac arimaha gobolka Sool, waxaana uu xusay Xildhibaankani oo magaciisa ka gaabsaday in ay baahiso Puntlandtimes.com in xukuumadda madaxweyne Gaas lagula xisaabtami doono waxyaabaha uga qorshaysan dagaalka gobolka Sool iyo sidoo kale qaab walba oo looga saari doono ciidamada Somaliland deegaanada ay kaga sugan yihiin Puntland.
Madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe ayaa waxaa habeenkii xalay ahayd ka dhacay kulan xasaasi ah oo u dhaxeeyey qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland iyo madaxweyne C/weli Gaas, kuwaas oo iyagu kawada hadlay xaaladaha gobolka Sool.
Xoggo hoose ay ka helayso Puntlandtimes.com madaxtooyada dowladda Puntland ee magaalada Garoowe ayaa sheegaya in Xildhibaanadu ay ugu baaqeen madaxweyne Gaas in uu hor yimaado Baarlamaanka isla markaasna su’aalo laga weydiin doono arimaha gobolka Sool, isagoo madaxweynuhuna dhankiisa kawado qorshihii ugu dambeeyey ee uu ku iclaamin doono dagaal ka dhan ah malayshiyaadka Jeegaanta si looga saaro guud ahaanba gobolka Sool.
One thought on “DEG DEG+XOG:Madaxweyne Gaas oo ku dhawaaqaya dagaalkii ugu cuslaa & Xildhibaanada P/land oo shir deg deg ah ka yeeshay Xaaladda Tukaraq+Soo Celinta Sool”
Haliye July 9, 2018 at 11:49 am · Edit
Webpage-kan waxaa leh Gaas, waxaana lagu qoraa madaxtooyada dhexdeeda, waa jaahwareeriyo, shirkasna wuxuu ahaa mid ku saabsan MUDOKORORI.